Tux Paint 0.9.25 inokutendera kuti ugadzire maGIF ane hupenyu, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva | Linux Vakapindwa muropa
Ndichiri kurangarira ndichienda kukomputa kirasi uye kuti chimwe chezvinhu chavakatidzidzisa kushandisa Microsoft Paint. Ini handisati ndambove fan hombe yeiyo software (kana chero imwe chete yekambani imwe chete), asi Microsoft Paint ine "mafeni" ayo. Uye sezvo nharaunda yeLinux ichigona kuumbiridza zvese, zviripo dzimwe nzira dzinoverengeka, pakati peiyo protagonist yenyaya ino ichangoburwa Tux Pendi 0.9.25.
Uine dzimwe nzira dzakawanda, zvinonetsa kusarudza imwe, asi iyi ine zita reLinux mascot uye yanga iri mukusimudzira kwenguva yakareba, ichiiita imwe yeanonyanya kuzivikanwa. Iyo nyowani vhezheni yave ichiwanikwa kubvira gore rapfuura, iyo inogona kuve yakareba nguva dai isu taive pakati pegore, asi muchokwadi isu takangokwanisa chete kuishandisa kwevhiki. Uye pakati pezvinhu zvakatanhamara zvikuru, imwe inomira pamusoro peimwe: Tux Paint 0.9.25 inobvumidza iwe kutumira kunze akateedzana emifananidzo kana masiraidhi kuma animated maGIF.
Tux Paint 0.9.25 yakakwira
Nhau dzavakaunza mumwedzi minomwe yapfuura ndeinotevera:
Kugona kuburitsa yakawandisa yakatarwa mifananidzo kune animated maGIF.
Sarudzo nyowani mumudziyo wekushandisa.
Iyo yekudzima chishandiso yakagadziridzwa uye ikozvino inosanganisira madiki madiki, pamwe nekwanisi yekushandisa yakatsetseka, inoenderana brashi kurova kana uchifambisa pointer nekukurumidza.
Iyo-pa-skrini keyboard ichaonekwa zvino pane yakakura skrini.
Tux Paint ndeye multiplatform software, zvinoreva kuti inowanikwa Linux, macOS uye Windows, pamwe ne Android neBSD, asi kune yekupedzisira hakuna vhezheni itsva parizvino. Vashandisi veLinux vanogona kuiisa kubva nenzira dzakasiyana, dzimwe dziripo mu yepamutemo kurodha peji. Ivo vanofanirwa kugadzirisa iyo Flathub vhezheni munguva pfupi, uye Arch Linux based system vashandisi vanogona ikozvino kuiisa kubva kuAUR.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Tux Paint 0.9.25 inouya nenhau dzakatanhamara, senge kugona kugadzira maGIF ane hupenyu
KDE Kunyorera 20.12.1 inosvika neNeochat, kugadzirisa, kugadzirisa uye nezvimwe